musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Canada Kupa Nyowani Kuzviparadzanisa Saiti kubva kuCOVID-19
Nekudaro, kune vamwe vanhu muCanada, dzimba dzakatsvikinyidzana uye kudhura kwakanyanya kunogona kuita kuti zvive zvisina kuchengetedzeka kana kusaita kuzviparadzanisa nevamwe, vachizviisa ivo, mhuri dzavo nenharaunda panjodzi pasina mhosva yavo.
Nhasi, Honourable Jean-Yves Duclos, Gurukota rezvehutano, vazivisa mari inodarika mamirioni mashanu emadhora kutsigira zvirongwa zviviri zvinotevera muBritish Columbia, kuburikidza neHurumende yeCanada's Safe Voluntary Isolation Sites Chirongwa:
• chirongwa chekudzosera mari yevashandirwi kuvashandi vezvekurima vanogara nekushanda muBritish Columbia kuburikidza neHurumende yeBritish Columbia yebazi rezvekurima, chikafu nehove kubatsira kutsigira zvinodiwa nevarimi vega; uye
• nzvimbo yakachengeteka yekuzvidira yekuzvisarudzira muGuta reSurrey kuburikidza neFraser Health Authority.
Nzvimbo dzekuzvidira dzekuzviparadzanisa nevamwe dzinobatsira vanhu vane COVID-19-kana kuti vakasangana nazvo-vanowana pekugara pekugara vakachengeteka kuti vazvichengetedze ivo nenharaunda yavo. Aya masaiti ari kuwedzera kune zvivakwa zviripo kune vanhu vane kushaya pekugara avo vanofanirwa kuzviparadzanisa nevamwe nekuda kwebvunzo.
Kuzvidira nzvimbo dzekuzviparadzanisa nevamwe dzinoderedza njodzi yekuparadzira hutachiona pakati pevanogara mudzimba mumamiriro ezvinhu apo vanhu vakatarisana nedzimba dzakazara vanhu uye vasina imwe nzira. Aya masaiti ndeimwe yeanokurumidza kupindura maturusi akamiswa kubatsira kumisa kupararira kweCCIDID-19, uye anogona kuendeswa kunharaunda dzakatarisana nekuputika.
Iyo Safe Voluntary Isolation Sites Chirongwa inotsigira zvakananga maguta, maneja uye hutano matunhu ari panjodzi yekutapurirana nharaunda COVID-19. Saiti dzakasarudzwa pasi peChirongwa dzinopa nzvimbo inosvikika apo vanhu vanogona kuzviparadzanisa nevamwe vakachengeteka kwenguva inodiwa. Vakuru vehutano vemunharaunda vanosarudza vanhu vanokodzera vanogona kupihwa sarudzo yekuendesa kunzvimbo yekuzviparadzanisa nevamwe nekuzvidira kuti vachengetedze ivo neveimba yavo panguva yekubuda munharaunda yavo.